Zanu PF neMDC Mbiri Zvopesana Nguva Ichaitwa Sarudzo
Mapato eMDC maviri ari muhurumende anoti haasi kuzomanikidzwa nemutungamiri we nyika, VaRobert Mugabe, nebato ravo re ZANU-PF kuti kuitwe sarudzo munyika gore rinouya mwedzi wa Kurume usati wapfuura kana munyika musati mave nebumbiro idzva kana kuti zvinhu zvinodiwa kuti nyika ive nesarudzo dzakachena, zvisati zvagadziriswa.
Va Mugabe vakataura neChishanu kuti vari kuda kuti sarudzo dziitwe gore rinouya chero nguva mwedzi waKurume usati wapera.
Va Mugabe nebato ravo vakamboti sarudzo dziitwe gore rino, asi MDC yakaramba ichiti zvinhu ngazvitange zvagadziriswa.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, Va Nhlanhla Dube, vanoti bato ravo harisi kuzodhonzwa naVa Mugabe kuti ripinde musarudzo zvinhu zvisati zvagadziriswa zvakanaka zvinoenderana nesarudzo dzakachena.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, Va Douglas Mwonzora, vati bato ravo rinoda sarudzo asi pane zvinoda kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa.
Nyanzvi mune zvematongerwe enyika uye vari maneja webazi re Governance and Democracy musangano re Institute for a Democratic Alternative Zimbabwe, Va Joy Mabenge, vanoti semaonere avo, sarudzo dzingatoitwa kupera kwegore rinouya.